MIXCRAFT 8.1.413 အခမဲ့ DOWNLOAD - PROGRAM ကိုပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း - 2019
Mixcraft - ဤအမှု၌ပေါ့ပါးလွယ်ကူအသုံးပြုမှုဖြစ်သောပိုပြီး features နဲ့ကြီးမြတ်အလားအလာနှင့်ပြည့်စုံဂီတ, ဖန်တီးရန်အနည်းငယ်အစီအစဉ်များကိုတဦး။ တစျအထုပ်ထဲမှာကိရိယာများနှင့် VST စုပေါင်းနှင့်အတူအလုပ်လုပ်ရန် sequence နဲ့အိမ်ရှင် - ဤဒစ်ဂျစ်တယ်အသံကို Workstation (ဒစ်ဂျစ်တယ်အသံ Workstatoin ဒေါ်) ဖြစ်ပါသည်။
သင်နှင့်ကလုပ်နေတာစတင်သင့်နိုင်သည့်နှင့်အတူ program တစ်ခု - သင်သည်သင်၏ကိုယ်ပိုင်ဂီတ, Mikskraft ဖန်တီးသင်၏လက်ကိုကြိုးစားရန်လိုလျှင်။ ဒါဟာတစ်ဦးမျှမျှတတရိုးရှင်းပြီးအလိုလိုသိ interface ကိုရှိပါတယ်မလိုအပ်သောဒြပ်စင်နှင့်အတူပိမဟုတ်ပေမယ့်ကအစဂီတပညာရှင်များအတွက်နီးပါးအဆမဲ့ဖြစ်နိုင်ချေပေးထားပါတယ်။ သင်ဒေါ်ဒီလုပျနိုငျဆိုတဲ့အချက်ကိုကျနော်တို့ကိုအောက်တွင်ဖော်ပြပါ။
ကျနော်တို့ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်စေရန်အကြံပြု: Programs ကိုဂီတကိုဖန်တီးရန်
Mixcraft သင်သည်ဂီတ၏တစ်မူထူးခြားတဲ့အပိုင်းအစဖန်တီးနိုင်သည့်သုံးပြီးအသံ, ကွင်းများနှင့်နမူနာ၏ကြီးမားသောစာကြည့်တိုက်၏၎င်း၏အစုကိုအတွင်းပါဝင်သည်။ ထိုသူအပေါင်းတို့သည်မြင့်မားသောအသံအရည်အသွေးရှိသည်နှင့်ကွဲပြားခြားနားသောအမျိုးအစားများအတွက်ရရှိနိုင်ပါသည်။ မှန်ကန်သော (အလိုရှိသော) နိုင်ရန်အတွက်သူတို့ကိုအားမရ, program ကိုသီချင်းစာရင်းကိုအတွက်အသံဤအပိုင်းအစများချပြီး, သင်ကဂီတလက်ရာဖန်တီးပါလိမ့်မယ်။
ဂီတအတွက်လုပ်ငန်းစဉ်သည် ပို. ပင်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းနှင့်စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ဖြစ်လာမှုကြောင့်အရာမှ Mikskraft ကိုယ်ပိုင်ကိရိယာများ, synthesizer တွေနဲ့ samplers ၏ကြီးမားသောထား၏လက်နက်တိုက်၌တည်၏။ အဆိုပါအစီအစဉ်ကိုတူရိယာ၏ကြီးမားသောရွေးချယ်ရေးကမ်းလှမ်း, ဗုံ, ဒေသန္တရ, ညှို့, ကီးဘုတ်, စတာတွေရှိပါတယ် အဲဒီကိရိယာမဆိုတွင်ပြုလုပ်သူ့ဟာသူအသံစိတ်ကြိုက်, သငျသညျ, တစ်မူထူးခြားတဲ့သီချင်းဆိုဖန်တီးနိုင်ပါတယ်သွားလာရင်းကမှတ်တမ်းတင်တစ်ခုသို့မဟုတ်ဇယားကွက်ပုံစံပေါ်ဆွဲပါ။
အချောအပုဒ်အမျိုးမျိုးရှိသမျှတစ်ခုတည်းအပိုင်းအစအဖြစ်တစ်ခုလုံးအဖြစ်တစ်ခုလုံးကိုဖွဲ့စည်းမှု, အ Mixcraft ပဒေသာပါရှိသည်ရာ၏, အထူး effect နှင့် filter တွေနဲ့ကုသနိုင်ပါတယ်။ သူတို့ကိုအသုံးပြုခြင်း, သင်စံပြ, စတူဒီယိုအသံကအောင်မြင်ရန်နိုင်ပါတယ်။
program ကိုအမျိုးမျိုးသောအသံကသက်ရောက်မှုကို process နိုငျကွောငျးထို့အပြင်အတွက်ကြောင့်ကို manual နဲ့ automatic modes အတွက်အသံပုံပျက်သောများ၏ဖြစ်နိုင်ခြေကိုတင်ပြမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ Mikskraft ပြင်ဆင်ချက်အနေဖြင့်အချိန်ဇယားအထိအသံ၏ဖန်တီးမှုနှင့်ညှိနှိုင်းမှုများအတွက်လုံလောက်သောအခွင့်အလမ်းကိုပေးစွမ်းသည်နှင့်ဂီတစည်းချက်တစ်ခုပြီးပြည့်စုံပြန်လည်ထူထောင်ရေးနှင့်အတူအဆုံးသတ်။
တစ်ဂီတဖွဲ့စည်းမှု၏ဖန်တီးမှုတစ်ခုအညီအမျှအရေးကြီးသောခြေလှမ်းလေးနက်, ငါတို့သည်အစီအစဉ်ကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားနေကြသည်ဤကိစ်စနှငျ့ ပတျသကျ. အတွက်အံ့အားသင့်စရာရှိသည်။ ဤသည်ကို Workstation ကွဲပြားခြားနားသော parameters တွေကိုတစ်အရေအတွက်ကတစ်ပြိုင်နက်တည်းပြသနိုင်သည့်အတွက်န့်အသတ်အလိုအလျောက်ဧရိယာပေးထားပါတယ်။ ဒါကြောင့်တစ်ဦးတူရိယာ, ဒယ်အိုး, filter ကို, သို့မဟုတ်အခြားမာစတာအကျိုးသက်ရောက်မှု၏အသံအတိုးအကျယ်ပြောင်းလဲလာသောရဲ့, ဒီဒီဒေသမှာပြသမည်ဖြစ်ပြီးယင်းလမ်းကြောင်း၏သင်တန်းကိုပြောင်းလဲရန်ရှိမရှိက၎င်း၏စာရေးသူအားဖြင့်ပဋိသန္ဓေယူသောလမ်းကစားနေသည်။
သာ. ကြီးမြတ်အဆင်ပြေဘို့နှင့် Mixcraft အတွက်ဂီတ၏ဖန်တီးမှုလွယ်ကူချောမွေ့ MIDI-devices တွေကိုထောက်ခံပါတယ်။ တစ်ဦးသည် PC-သဟဇာတ MIDI ကီးဘုတ်သို့မဟုတ်စည်စက်ကိုချိတ်ဆက်က virtual တူရိယာနှင့်အတူကချိတ်ဆက်နှင့်ဂီတကစားခြင်းကိုစတင်ပါကလောက်, သင်တန်း, program ကိုပတ်ဝန်းကျင်၌မှတ်တမ်းတင်ဖို့မေ့လျော့ကြပါဘူး။
နမူနာ (ကွင်း) ၏သွင်းကုန်နှင့်ပို့ကုန်
ယင်း၏လက်နက်တိုက်အသံ၏ကြီးမားသောစာကြည့်တိုက်နှင့်အတူ, ဒီကို Workstation ကိုလည်းအသုံးပြုသူကိုတင်သွင်းဖို့နဲ့နမူနာများနှင့်ကွင်းနှင့်အတူ Third-party စာကြည့်တိုက်များနှင့်ချိတ်ဆက်ရန်ခွင့်ပြုပါတယ်။ ဒါ့အပြင်သူကဂီတကိုအပိုင်းပိုင်းတင်ပို့ဖို့စွမ်းရည်ရှိပါတယ်။
ပံ့ပိုးမှု Re-ကြေးနန်း-applications များ
Mikskraft Re-ကြေးနန်းနည်းပညာနှင့်သဟဇာတဖြစ်ကြောင်း applications များထောက်ခံပါတယ်။ ထို့ကြောင့်ကကို Workstation အပေါ် Third-party application ကိုမှအသံညွှန်ကြားနှင့်၎င်း၏လက်ရှိသက်ရောက်မှုမှ၎င်းကိုလုပ်ဆောင်ရန်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
ဂီတဖန်တီးခြင်းသည် Self-လေးစားအစီအစဉ်ကိုကဲ့သို့ပင် Mixcraft အလုံအလောက်ထက်ပိုရှိပါတယ်ရာ Third-party VST-plug-in, ထောက်ခံပါတယ်။ ဤရွေ့ကားအီလက်ထရောနစ် tools တွေကိုမယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်န့်သတ်ချက်မှမဆိုကို Workstation ၏လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းကိုချဲ့ထွင်နိုင်ပါ။ သို့သော် FL Studio ကမှမတူဘဲ, သင်ကပရော်ဖက်ရှင်နယ်အဆင့်တွင်ဂီတကိုဖန်တီးသည့်အခါတစ်ဦးဒေါ်ချိတ်ဆက်သီးသန့်ဂီတ VST တူရိယာစဉ်းစားနိုင်ပါတယ်, ဒါပေမယ့် effect နှင့် filter အမျိုးမျိုးတို့ကိုအသံအရည်အသွေးကိုတိုးတက်စေခြင်းနှင့်မြှင့်တင်ရန်ဖို့မရှင်းလင်းစွာလိုအပ်ပါသည်။
Mikskraft ၌အလွန်ဂီတအတွက်လုပ်ငန်းစဉ်ရိုးရှင်းစွာအရာအသံ, မှတ်တမ်းတင်နိုင်ပါတယ်။
ဒီတော့ဥပမာ, ကွန်ပျူတာတစ်ဦးအား MIDI-ကီးဘုတ်ချိတ်ဆက်ထားနိုင်ပြီးမှတ်တမ်းတင်အပါအဝင်မည်သည့်ဂီတတူရိယာထဲမှာ program ကိုဖွင့်လှစ်ခြင်းနှင့်ညှိကစား။ အတူတူနေတဲ့ကွန်ပျူတာကီးဘုတ်နှင့်အတူလုပ်ဆောင်နိုင်တယ်, သို့သော်, ဒါအဆင်ပြေလိမ့်မည်မဟုတ်ပေ။ သငျသညျမိုက်ခရိုဖုန်းထံမှစကားသံကိုမှတ်တမ်းတင်ချင်လျှင်, ဤရည်ရွယ်ချက်အသံမှတ်တမ်းတင်ရန် ပို. အခွင့်အလမ်းများကမ်းလှမ်းထားတဲ့ Adobe ကစာရင်းစစ်, သုံးစွဲဖို့အဘို့ဟု သာ. ကောင်း၏။
Mixcraft သုံးမွှာပူးကိုထောက်ပံ့ခြင်းနှင့်သင်သော့၏မြင်ကွင်းကိုတင်ထားရန်ခွင့်ပြုတော်မူသောထမ်းဘိုးနှင့်အတူအလုပ်လုပ်ရန် tools တွေ၎င်း၏အစုကိုဖြစ်ပါတယ်။
ဒါကြောင့်သင့်ရဲ့အဓိကရည်မှန်းချက်ဖြစ်တယ်, ဒါကြောင့် Sibelius ကဲ့သို့ထိုကဲ့သို့သောထုတ်ကုန်သုံးစွဲဖို့ပိုကောင်းပါလိမ့်မယ် - ဒါဟာဂီတရမှတ်များဖန်တီးခြင်းနှင့်တည်းဖြတ်လျှင်အစီအစဉ်တွင်မှတ်စုများနှင့်အတူအလုပ်, အခြေခံအဆင့်မှာအကောင်အထည်ဖော်ကြောင်းနားလည်သဘောပေါက်ထားပါသည်။
Analog စစုပေါင်းခြင်းကွန်ပျူတာဂစ်တာနဲ့စံကိုက်ညှိဖို့ကွန်နက်ရှင်ကို configure ဖို့အသုံးပြုနိုင်တိကျ chromatic tuner တပ်ဆင်ထားသည့်သီချင်းစာရင်းကို Mikskraft အတွက်တစ်ဦးချင်းစီအော်ဒီယိုသီချင်း။
Mixcraft အဓိကအားဂီတနှင့်အစီအမံများဖန်တီးမှုအပေါ်အာရုံစူးစိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုနေသော်လည်းဤအစီအစဉ်ကိုလည်းဗွီဒီယိုနဲ့အသံ Dubbing တည်းဖြတ်ရန်သင့်အားခွင့်ပြုပါတယ်။ ဒီကို Workstation ခုနှစ်တွင်ဗီဒီယို၏တေးသံနှင့်အတူတိုက်ရိုက်ဗီဒီယိုနှင့်အလုပ် processing များအတွက်အကျိုးသက်ရောက်မှုများနှင့် filter ၏ကြီးမားသောထားပစ္စုပ္ပန်ဖြစ်ပါတယ်။
1. အပြည့်အဝရုရှား interface ကို။
2. တစ်ဦးကရှင်းလင်းရိုးရှင်းပြီးလွယ်ကူပါတယ်-to-အသုံးပြုမှု graphical interface တစ်ခု။
3. အကြီးစားအသံများနှင့်တူရိယာအစုံအဖြစ်ဂီတဖန်တီး Third-party စာကြည့်တိုက်များနှင့် priloezheny ထောက်ပံ့။
4. စာသားကိုလက်စွဲနှင့်ဤကို Workstation တွင်တေးဂီတဖန်တီးလေ့ကျင့်ရေးကဗီဒီယိုသင်ခန်းစာ၏ကြီးမားသောအရေအတွက်ကို၏ရှေ့မှောက်တွင်။
1. အခမဲ့မဟုတ် Distributed, နှင့်စမ်းသပ်ကာလမှသာ 15 ရက်ဖြစ်ပါတယ်။
2. သူတို့၏အသံစတူဒီယိုအစီအစဉ်၏အရည်အသွေးပေါ်တွင်သင်၏ကိုယ်ပိုင်စာကြည့်တိုက်အတွက်ရရှိနိုင်ပါသောအသံများနှင့်နမူနာဝေးစံပြအနေဖြင့်သော်လည်း, ဥပမာအားဖြင့်, Magix ဂီတကိုဖန်ဆင်းသော, ထက်နေဆဲအများကြီးပိုကောင်း။
အဆင့်မြင့်မြင့်ကို Workstation, သင့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဂီတ, ကိုကိုတည်းဖြတ်နှင့် processing များအတွက်နီးပါးန့်အသတ်ဖြစ်နိုင်ခြေပေး - အကျဉ်းချုပ်ရန်, ငါတို့ Mikskraft ကြောင်းပြောသင့်ပါတယ်။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, ဒါပင်အတွေ့အကြုံ PC ကိုအသုံးပြုသူနားလည်ကြောင့်တတ်နိုင်သမျှအတူအလုပ်လုပ်ရန်, အလွန်သင်ယူရန်လွယ်ကူခြင်းနှင့်အသုံးပြုခြင်းဖြစ်သည်။ ထို့အပြင်အစီအစဉ်ကိုယင်း၏များထက်အများကြီးလျော့နည်း disk space ကိုကြာနှင့် system အရင်းအမြစ်များကိုအဘို့အမြင့်မားသောလိုအပ်ချက်များကိုစည်းကြပ်မထားဘူး။
NanoStudio အကွောငျးရငျး Samplitude Freemake ပေး Audio Converter
Mixcraft - သင့်ကိုယ်ပိုင်ဂီတဖန်တီးတည်းဖြတ်ရန်လုံလောက်သောအခွင့်အလမ်းများနှင့်အတူဒေါ် (အသံဖိုင်ကို Workstation) ကိုအသုံးပြုရလွယ်ကူခြင်းနှင့်အဆင်ပြေ။
ရေးသားသူ: Acoustica, Inc
ကုန်ကျစရိတ်: $ 75
Size: 163 MB အထိ
ဗီဒီယို Watch: Mixcraft Build 413 Crack With Registration Code Download Full Version (စက်တင်ဘာလ 2019).